Beijing ilaa Belgrade: Duulimaadyada tooska ah ee Hainan Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Beijing ilaa Belgrade: Duulimaadyada tooska ah ee Hainan Airlines
Airlines • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • News • Wararka Slovenia • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Duulimaadkii ugu horreeyay ee adeegga cusub, Hainan Airlines HU7937, oo ka duushay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Beijing, ayaa si guul leh ugu degtay garoonka diyaaradaha Belgrade Nikola Tesla ee 9: am 20 on September 15, 2017 waqtiga maxaliga ah kadib 13 saacadood oo hawada ah. Dabaaldega iyo xafladda jarista xarigga loogu talagalay duulimaadkii ugu horreeyay waxaa ka soo qayb galay raiisul wasaaraha Serbia Ana Brnabic, Raiisel wasaare kuxigeenka ahna wasiirka dhismaha Zorana Mihajlović, safiirka Shiinaha ee Serbia Li Manchang, Hainan Airlines Madaxweyne kuxigeenka Quan Dong iyo maamulayaasha dhowr shirkadood oo Shiine ah oo ka howlgala Serbia iyo sidoo kale koox ka mid ah hogaamiyaasha warshadaha maxalliga ah ee muhiimka ah iyo marti sharaf.
Raiisel wasaaraha Serbia Ana Brnabic khudbadeeda ku sheegtay heerka wada shaqeynta ka dhaxeysa Shiinaha iyo Serbia ayaa si aad ah u koray, iyada oo wadarta qiimaha mashaariicda udhaxeysa labada dal ee hada socda ay aad usii kordhayaan US $ 6 bilyan, halka, isla markaa, ganacsiga labada dhinac uu si aad ah u kordhayay. Safiirka Shiinaha u fadhiya Serbia Li Manchang ayaa sheegay in horumarro cusub ay maalin walba ka soo ifbaxayaan labada dal isla markaana dib u soo celinta adeegii hawada ee tooska ahaa ee u dhexeeyay labada caasimadood ay caddeyn dheeri ah u tahay sii xoojinta xiriirka. In la waafajiyo Shiinaha ee Hal suun, Hal waddo, Hainan Airlines waxay qorsheyneysaa inay sii waddo ballaarinta joogitaankeeda meel ka baxsan suuqa gurigeeda, gaar ahaan dhammaan gobollada Bartamaha iyo Yurubta Bari, badankooduna durba xiriir dhow ayey la sameeyeen Shiinaha, ayuu yiri Quan Dong.
Sanadihii la soo dhaafay, Hainan Airlines waxay ku guuleysatay guulo deg deg ah gaadhitaankeeda caalamiga ah, iyadoo saamiga dakhliga loo aaneynayo qaybta caalamiga ah ee sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya. Qeybtii labaad ee sanadkan, marka lagu daro Beijing-Prague-Belgrade iyo Shanghai-Tel Aviv adeegyada Hainan Airlines ayaa la qorsheeyay inay sidoo kale bilaabaan Shanghai-Brussels, Shenzhen-Brisbane, Chongqing-New York, Chengdu-New York, Shenzhen-Brisbane iyo adeegyada Shenzhen-Cairns iyo sidoo kale dhowr waddo oo kale oo qaaradaha ah, oo sii ballaadhinaya shabakadda caalamiga ah ee side side ee adduunka oo dhan.
Ruushka ayaa ku daray Talyaaniga cusub, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan...
Bahal Cusub oo COVID-XNUMX: Wuxuu ka baxaa tallaalka, si degdeg ah ayuu u faafaa
Ganacsatada Grasshopper Uganda Hadda lagama yaabo inay maqnaadaan...